Qiimaynta Minnesota - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Qiimaynta Guud ee Minnesota (MCAs) iyo qiimaynta kale, Imtixaanka Minnesota ee Xirfadaha Tacliineed (MTAS), waa imtixaanada gobolka oo dhan ka caawiya degmooyinka inay cabiraan horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee Minnesota iyo inay la kulmaan shuruudaha Sharciga Dugsiga Hoose iyo Sare (ESEA). Ardaydu waxay galaan hal imtixaan maaddo kasta. Ardayda badankood waxay qaataan MCA, laakiin ardayda qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah ee la kulma shuruudaha u-qalmitaanka waxay qaadan karaan MTAS.
Liistada hoos ku qoran waxay muujineysaa imtixaannada maado ahaan iyo darajooyinka la siiyay:
Akhrinta: MCA ama MTAS (fasalada 3-8, 10)
Xisaabta: MCA ama MTAS (fasalada 3-8, 11)
Saynis: MCA ama MTAS (fasalada 5, 8, iyo hal mar dugsiga sare)
Diyaargarowga Shaqada iyo Kuleejka
MDE ahaan, degmooyinku waxay leeyihiin shuruudo dhowr ah oo lagu buuxiyo ardayda xirfadooda iyo qorshaynta kuleejka ee ardayda dhigata fasalka 8aad iyo ka dib. Tan waxaa ka mid ah in ardayda fasalada 11aad iyo 12aad la siiyo fursad ay kaga qayb galaan imtixaanka gelitaanka kuleejka ee qaran ahaan la aqoonsan yahay (ACT ama SAT) maalinta dugsiga.
Qiimaynta Xisaabtanka Aqoonta Luqadda Ingiriisiga
ACCESS iyo Alternate ACCESS ee ELLs waa qiimeynta ay soo diyaarisay daladda WIDA isla markaana lagu maamulo ardayda barta af Ingiriisiga si loo cabiro horumarka laga gaarayo heerarka Minnesota ee horumarinta luqadda Ingriisiga, oo ay soo diyaarisay daladda WIDA. Inta badan bartayaasha Ingiriisiga waxay qaadan doonaan ACCESS ee ELLs, laakiin bartayaasha Ingiriisiga ah ee helay adeegyada waxbarashada gaarka ah lana kulma tilmaamaha kaqeybgalka waxay qaadan karaan Alternate ACCESS ee ELLs.
Daaqada Imtixaanka gobolku waa Maarso 2 - Maajo 8. Talooyinka diyaarinta imtixaanka waxaa lagu daray dukumintiga hoose, oo ay bixiso Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Soo-jeedinta Diyaarinta Tijaabada - Ingiriis
Soo-jeedinta Diyaarinta Tijaabada - Isbaanish
Soo-jeedinta Diyaarinta Tijaabada - Soomaali
Tijaabi Macluumaadka Amniga
Iyada oo qayb ka ah dhaqanka hufnaanta tacliimeed, waxaan jeclaan lahayn inaan xasuusino qoysaska iyo ardayda muhiimada amniga imtixaanka iyo rajada laga qabo inay ardaydu xafidi doonaan waxyaabaha ku jira imtixaanka oo ay u dhaqmaan si daacadnimo iyo hufnaan leh inta lagu jiro maamulka qiimeynta gobolka. Degmadu waxay ardayda ka rajeyneysaa inay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
Ardaydu MA isticmaali karaan taleefannada gacanta, tiknoolajiyad la gashado (tusaale ahaan, saacadaha casriga ah, raadraacayaasha jimicsiga) ama qalab kale oo elektaroonig ah (marka laga reebo aaladda dugsiga u leeyahay ee loo isticmaalay baaritaanka) waqti kasta oo lagu jiro imtixaanka, oo ay ku jiraan xilliyada nasashada. Ardaydu maahan inay adeegsadaan qalabkan xitaa marka imtixaanku dhammaado. Haddii imtixaanka ballaadhan ee dugsiga loo qoondeeyey waqti cayiman, aaladaha waa in aan la isticmaalin inta lagu jiro waqtigaas, xitaa haddii ardaygaasi dhammeeyey imtixaankiisa.
Kormeerayaasha Imtixaanka waxaa laga filayaa inay ku wargeliyaan ardayda inaysan heli karin ama arki karin wicitaannada, qoraallada, ama digniinta inta lagu jiro maamulka imtixaanka. Haddii ardaygu haysto taleefanka gacanta ama qalab kale oo elektiroonig ah qolka imtixaanka, habraacyada soo socda ayaa la raacayaa:
Ardaygu waa inuu damiyaa taleefanka gacanta (ama aalad kale) oo DAMAN (oo aan la aamusin maadaama digniinta shaqsiyadeed ay wali shaqeyn karto).
Ardayga waxaa la siiyaa baqshad. Baqshadu waa inay dabooshaa waxyaabaha ku jira taleefanka (aaladda) - ma cadda.
Haddii ardaygu helo ogeysiis (tusaale, cod-dhawaaq, gariir) inta lagu jiro imtixaanka, ardaydu waa inay u dhiibaan taleefanka (aaladda) (oo ay tahay inay ku jirto baqshadda) Kormeeraha Imtixaanka.
Haddii aad wax welwel ah ka qabto dhacdooyinka looga shakiyo ee qishka ama dhaqan kale oo aan habboonayn ama anshax xumo ah oo ku saabsan qiimeynta gobolka oo dhan, waxaad u wargelin kartaa macluumaadkaas maamulaha dugsiga ardaygaaga; waaxda cilmi baarista, qiimeynta iyo qiimeynta ee degmada ( REA@rdale.org ama 763-504-8103); ama adoo soo gudbinaya Warbixinta Amniga Imtixaanka Degmada .
Joogtaynta sharafta imtixaanada iyo waxyaabaha imtixaanku muhiimad weyn ugu leeyahay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Anshax xumo ama anshax xumo ardayda ama barayaashu waxay wiiqaysaa ansaxnimada tarjumaada dhibcaha imtixaanka. Fadlan soo sheeg dhacdooyinka looga shakisan yahay ee qishka ama burcadbadeednimada ee waxyaabaha imtixaanka iyadoo la adeegsanayo Khadka Tilmaamaha Amniga ee Imtixaanka Gobolka Minnesota oo dhan ama la xiriir Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ( mde.testing@state.mn.us ama 651-582-8674)
Su'aalaha Had iyo Jeer La Is Weydiiyo: Maxay Tahay Sababta Natiijooyinka Imtixaanka Gobolka oo Dhan
Imtixaanada gobolka Minnesota oo dhan waa ujeedo, cabirro la jaangooyay oo ku saabsan hanashada ardayda ee heerarka tacliinta ama aqoonta. Ardayda, qoysaska, macallimiinta iyo maamulayaasha waxay u isticmaalaan natiijooyinka imtixaanka gobolka oo dhan iyagoo qayb ka ah nidaam dhammaystiran oo lagu qiimeeyo barashada. Jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo waxay sharxayaan ujeedada imtixaanka gobolka oo dhan iyo sababta ay muhiim u tahay in la hubiyo hufnaanta dhibcaha imtixaanka waxaa laga heli karaa dukumentiga Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) ee su'aalaha la xiriira ee hoos ku qoran.
MDE FAQ - Ingiriisi
MDE FAQ - Isbaanish
MDE FAQ - Soomaali
Xeerarka Minnesota, qaybta 120B.31, hoosaadka 4a, waxay u baahan tahay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) inay u soo daabacdo foom qoysaska inay soo buuxiyaan haddii ay diidaan inuu ardaygooda ka qaybqaato qiimeynta heerarka gobolka looga baahan yahay. Tilmaanta MDE ee hoos ku xira waxay siisaa xoogaa macluumaad aasaasi ah oo ka caawiya qoysaska inay gaaraan go'aanno xog-ogaal ah oo waxtar u leh ardaygooda, dugsigooda iyo bulshada. Foomka lagu buuxinayo shuruuddan sharci-dejinta waxaa laga heli karaa xiriirka hoose; waa in lagu soo celiyaa iskuulka ardaygaaga.
Hagaha iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Imtixaanka Gobolka oo dhan - Ingiriis
Hagaha iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Imtixaanka Gobolka oo dhan - Isbaanish
Hagaha iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Imtixaanka Gobolka oo dhan - Soomaali